Usambofa ‘Wakatsamwira Jehovha’ | Yokudzidza
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bicol Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano ChiSutu (Lesotho) Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Croatian Czech Dangme Danish Dutch Efik Estonian Ewe Finnish French Ga Georgian German Greek Greenlandic Guarani Haitian Creole Hiligaynon Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kazakh Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Kwangali Kwanyama Latvian Lingala Lithuanian Luo Malagasy Malay Maltese Mixe Mutauro Wemasaini wokuArgentina Mutauro Wemasaini wokuBrazil Mutauro Wemasaini wokuColombia Mutauro Wemasaini wokuItaly Mutauro Wemasaini wokuJapan Mutauro Wemasaini wokuMexico Ndebele Ndonga Nepali Norwegian Nzema Oromo Pangasinan Polish Portuguese Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swati Swedish Tagalog Tahitian Thai Tigrinya Tsonga Turkish Twi Ukrainian Uruund Uzbek Venda Vietnamese Waray-Waray Wayuunaiki Wolaita Xhosa Yoruba Zulu
“Upenzi hwomunhu wepanyika ndihwo hunokanganisa nzira yake, naizvozvo mwoyo wake unotsamwira Jehovha.”—ZVIR. 19:3.
Chii chingaita kuti tipedzisire ‘tatsamwira Jehovha’?
Zvinhu zvipi zvishanu zvingatibatsira kuti tisatsamwire Mwari?
Chii chatinofanira kuyeuka patinosangana nematambudziko akaoma?
1, 2. Nei tisingafaniri kupomera Jehovha kuti ndiye ari kukonzera matambudziko evanhu? Taura muenzaniso.
NGATITII uri murume ava nemakore akawanda akaroora uchigara zvakanaka nemudzimai wako. Asi rimwe zuva paunodzoka kumba, unosvika zvinhu zvakaita manyama amire nerongo. Midziyo yose yomumba yaparadzwa, uye kapeti yabvarurwa-bvarurwa zvokuti haichatomboiti. Musha wako waunoda waparadzwa. Ungati here, “Nei mudzimai wangu aita izvi?” Kana kuti ungati, “Ndiani aita izvi?” Zviri pachena kuti mubvunzo wechipiri ndiwo waizotanga kuuya mupfungwa dzako. Nei? Nokuti unoziva kuti mudiwa wako haangamboiti zvakadaro.
2 Mazuva ano nyika yedu yasvibiswa nechisimba, unzenza nezvimwewo. Sevadzidzi veBhaibheri, tinoziva kuti Jehovha haasi iye anokonzera matambudziko ose aya. Akasika nyika ino kuti ive paradhiso yakazonaka. (Gen. 2:8, 15) Jehovha ndiMwari ane rudo. (1 Joh. 4:8) Kudzidza Magwaro kwakatibatsira kuziva ari kukonzera matambudziko akawanda enyika. Hakuna mumwe kunze kwaSatani Dhiyabhorosi, “mutongi wenyika.”—Joh. 14:30; 2 VaK. 4:4.
3. Mafungiro edu angakanganiswa sei?
3 Asi hatingapomeri Satani kuti ndiye anokonzera matambudziko edu ose. Nei tichidaro? Nokuti mamwe acho anokonzerwa nokukanganisa kwedu. (Verenga Dheuteronomio 32:4-6.) Kunyange zvazvo tingabvuma pfungwa iyoyo, kusakwana kwedu kunogona kukanganisa mafungiro edu uye izvozvo zvine ngozi. (Zvir. 14:12) Pakuti kudii? Pane kuti tizvipe mhosva kana kupomera Satani, tinogona kutanga kupomera Jehovha. Kana kuti tingapedzisira ‘tatsamwira Jehovha.’—Zvir. 19:3.
4, 5. MuKristu angapedzisira sei ‘atsamwira Jehovha’?
4 Zvingaita here kuti tipedzisire ‘tatsamwira Jehovha’? Chokwadi kuita izvozvo hakubatsiri. (Isa. 41:11) Hapana chatingambowana. Mumwe mudetembi akamboti: “Ruoko rwako rwakanyanya kupfupika kuti urwisane naMwari.” Tingasasvika hedu pakutaura mashoko okunyunyutira Jehovha. Asi Zvirevo 19:3 inoti upenzi hwomunhu “hunokanganisa nzira yake, naizvozvo mwoyo wake unotsamwira Jehovha.” Chokwadi munhu anogona kutsamwira Mwari mumwoyo make. Anogona kuva nemafungiro iwayo asiri kutombozviona. Angatoita seane chigumbu naJehovha. Izvi zvinogona kuita kuti munhu wacho azosiyane neungano kana kuti asanyatsotsigira urongwa hwokunamata Jehovha.
5 Chii chingaita kuti tipedzisire ‘tatsamwira Jehovha’? Tingaita sei kuti tisabatwa nemusungo iwoyo? Zvinokosha kuti tizive mhinduro dzemibvunzo iyi. Nokuti mhinduro dzacho dzine chokuita neukama hwedu naJehovha Mwari!
6, 7. Nei vaIsraeri vomunguva yaMosesi vakatanga kunyunyutira Jehovha?
6 Chii chingaita kuti mushumiri waJehovha akatendeka atange kunyunyutira Mwari mumwoyo make? Ngatikurukurei zvinhu zvishanu zvingaita kuti tidaro toongorora mienzaniso yomuBhaibheri yevamwe vakabatwa nemusungo uyu.—1 VaK. 10:11, 12.
Kuteerera mashoko akaipa kunogona kukukanganisa (Ona ndima 7)
7 Mashoko akaipa anotaurwa nevamwe anogona kutikanganisa. (Verenga Dheuteronomio 1:26-28.) VaIsraeri vainge vachangobva kununurwa muIjipiti mavaiva varanda. Jehovha ainge aunza matambudziko gumi parudzi irworwo rwaivadzvinyirira uye aparadza Farao neuto rake muGungwa Dzvuku. (Eks. 12:29-32, 51; 14:29-31; Pis. 136:15) Vanhu vaMwari vainge vagadzirira kupinda muNyika Yakapikirwa. Asi panguva iyoyo yaikosha, vaIsraeri vakatanga kunyunyutira Jehovha. Chii chakaita kuti vasava nekutenda zvakadaro? Pavakanzwa mashoko akaipa akataurwa nevamwe vainge vatumwa kuti vanosora nyika, vakatya. (Num. 14:1-4) Zvakaguma nei? Chizvarwa chacho chose hachina kubvumirwa kupinda ‘munyika iyoyo yakanaka.’ (Dheut. 1:34, 35) Zvingaitika here kuti dzimwe nguva tirege mashoko akaipa anotaurwa nevamwe achinetesa kutenda kwedu topedzisira tava kunyunyutira Jehovha?
8. Chii chakaita kuti vanhu vaMwari vomumazuva aIsaya vatange kupomera Jehovha kuti ndiye aikonzera matambudziko avo?
8 Matambudziko anogona kutiodza mwoyo. (Verenga Isaya 8:21, 22.) Mumazuva aIsaya, vaJudha vakanga vava munguva yakaoma. Vainge vakapoteredzwa nevavengi. Zvokudya zvaiva zvishoma. Vakawanda vaiziya nenzara. Asi dambudziko guru raiva renzara yezvokunamata. (Amo. 8:11) Pane kuti vatsvage rubatsiro kuna Jehovha, vakatanga ‘kutuka’ mambo wavo naMwari wavo. Chokwadi vaipomera Jehovha kuti ndiye aikonzera matambudziko avo. Kana tikasangana nematambudziko, zvingaitikawo here kuti titaure mumwoyo medu kuti, ‘Nei Jehovha akarega ndichipinda mumatambudziko aya?’
9. Nei vaIsraeri vemumazuva aEzekieri vakava nemaonero akaipa?
9 Pane zvimwe zvinhu zvatisingazivi. VaIsraeri vomunguva yaEzekieri vaifunga kuti nzira dzaJehovha “hadzina kururama” nokuti pane zvimwe zvavaisaziva. (Ezek. 18:29) Zvaiita sekuti vaizviita vatongi vaMwari, vachinyanya kukoshesa mitemo yavo kupfuura yaJehovha vachimutonga vachishandisa manzwisisiro avo asina kukwana. Kana tisinganzwisisi imwe nyaya iri muBhaibheri kana zvimwe zviri kuitika muupenyu hwedu, tingafunga here mumwoyo medu kuti nzira yaJehovha haina kunaka kana kuti “haina kururama”?—Job. 35:2.
10. Munhu angatevedzera sei zvakaipa zvakaitwa naAdhamu?
10 Tinopomera vamwe zvivi uye zvikanganiso zvedu. Pakutanga chaipo, Adhamu akapa Mwari mhosva yechivi chake. (Gen. 3:12) Akapomera Jehovha kunyange zvazvo akatadza nemaune, achitoziva zvaizoitika kana atyora mitemo yaMwari. Tingatoti akati Jehovha akamupa mudzimai akaipa. Kubva ipapo, vamwe vakatevedzera Adhamu vachipomera Mwari nokuda kwokukanganisa kwavo. Zvakanaka kuti tizvibvunze kuti, ‘Kuodzwa mwoyo uye kugumburwa nezvikanganiso zvangu kungaita kuti ndisagutsikana nemitemo yaJehovha here?’
11. Tingadzidzei pana Jona?
11 Tinonyanya kufunga zvakatinakira. Muprofita Jona haana kufara, Jehovha paakaratidza mutsa kuvaNinivhi. (Jona 4:1-3) Nei? Anofanira kunge akanyara paakaona kuti mashoko ake nezvekuparadzwa ainge asina kuzadziswa. Jona akanyanya kufunga nezvemukurumbira wake zvokuti akatadza kunzwira tsitsi vaNinivhi vainge vapfidza. Tingapedzisirawo tava kunyanya kufunga zvakatinakira zvokuti ‘tinotsamwira Jehovha’ kuti ari kunonoka kuunza mugumo here? Kana tange tichiparidza kwemakumi emakore kuti zuva raJehovha rava pedyo, tingatanga here kugumbukira Jehovha kana vanhu vakatishora nemhaka yokuzivisa zvinotaurwa neBhaibheri?—2 Pet. 3:3, 4, 9.
ZVATINGAITA KUTI ‘TISATSAMWIRA JEHOVHA’
12, 13. Kana mwoyo wedu ukatanga kusava nechokwadi nezvimwe zvinhu zvinoitwa naJehovha, chii chatinofanira kuita?
12 Tingaita sei kana mwoyo wedu ukatanga kusava nechokwadi nezvimwe zvinhu zvinoitwa naJehovha? Yeuka kuti kuita izvozvo hakusi kuchenjera. Imwe shanduro yaZvirevo 19:3 inoti: “Kusaziva kwomunhu kunovhiringidza zvinhu zvake uye iye anokurumidza kurwisana naJehovha.” (Byington) Tichifunga izvozvo, ngatikurukurei zvinhu zvishanu zvichatibatsira kuti tisambobvumire zvinhu zvinotigumbura zvichiita kuti tipomere Jehovha.
13 Ramba uine ukama hwakasimba naJehovha. Kana tikaramba tiine ukama hwepedyo naMwari, hatizomutsamwiri. (Verenga Zvirevo 3:5, 6.) Tinofanira kuvimba naJehovha. Hatifaniriwo kuzviita vakachenjera kana kuti kunyanya kuzvifunga. (Zvir. 3:7; Mup. 7:16) Kana tikadaro, hatizopi Jehovha mhosva panoitika zvakaipa.
14, 15. Chii chichatibatsira kuti tisakanganiswe nemashoko akaipa anotaurwa nevamwe?
14 Usakanganiswa nemashoko akaipa anotaurwa nevamwe. VaIsraeri vomumazuva aMosesi vaiva nezvikonzero zvokutenda kuti Jehovha aigona kuvatungamirira kupinda muNyika Yakapikirwa. (Pis. 78:43-53) Asi pavakaudzwa mashoko akaipa nevasori gumi vasina kutendeka, “havana kuyeuka ruoko rwake.” (Pis. 78:42) Kana tikafungisisa zvakaitwa naJehovha, tichiyeuka zvinhu zvose zvakanaka zvaakatiitira, ukama hwedu naye huchasimba. Izvozvo zvichaita kuti tisabvumira mashoko akaipa anotaurwa nevamwe achikanganisa ukama hwedu naJehovha.—Pis. 77:11, 12.
15 Zvakadini kana tisingaoni hama dzedu zvakanaka? Pakadaro, ukama hwedu naJehovha hunogona kukanganisika. (1 Joh. 4:20) VaIsraeri pavasina kubvumirana nokugadzwa kwaAroni, Jehovha akaona sekuti vaimugunun’unira. (Num. 17:10) Saizvozvowo, kana tikatanga kugumbukira uye kugunun’unira vaya vari kushandiswa naJehovha pakutungamirira chikamu chesangano rake chepanyika, tinenge tichitonyunyutira Jehovha.—VaH. 13:7, 17.
16, 17. Chii chatinofanira kuyeuka kana tiri mumatambudziko?
16 Yeuka kuti Jehovha haakonzeri matambudziko edu. Kunyange zvazvo vaIsraeri vomumazuva aIsaya vainge vasiya Jehovha, akaramba achida kuvabatsira. (Isa. 1:16-19) Pasinei nedambudziko ratingasangana naro, tinogona kunyaradzwa nokuziva kuti Jehovha ane hanya nesu uye anoda kutibatsira. (1 Pet. 5:7) Anotovimbisa kutipa simba rokuti tirambe tichitsungirira.—1 VaK. 10:13.
17 Kana tisiri kururamisirwa, sezvakaita murume ainge akatendeka Jobho, tinofanira kuyeuka kuti Jehovha handiye anoita kuti tidzvinyirirwe. Jehovha anovenga kusaruramisira, asi anoda kururamisira. (Pis. 33:5) Dai tikava nemaonero akaita seeshamwari yaJobho, Erihu, uyo akati: “Mwari wechokwadi haamboiti zvakaipa, uye Wemasimbaose haamboiti zvisina kururama!” (Job. 34:10) Jehovha haakonzeri matambudziko edu, asi anototipa “zvipo zvose zvakanaka nezvinopiwa zvose zvakakwana.”—Jak. 1:13, 17.
18, 19. Nei tisingafaniri kufungira Jehovha zvisizvo? Taura muenzaniso.
18 Usafungira Jehovha zvisizvo. Mwari akakwana, uye kufunga kwake kwakakwirira kupfuura kwedu. (Isa. 55:8, 9) Saka kuzvininipisa uye kuva nemwero zvinofanira kutibatsira kubvuma kuti pane zvimwe zvatisinganzwisise. (VaR. 9:20) Kazhinji hatinyatsozivi zvose zvinenge zvichiitika. Hapana mubvunzo kuti, wakazvionera kuti mashoko echirevo ichi ndeechokwadi: “Anotanga kusvitsa nyaya yake anoita seakanaka, kusvikira mumwe auya mberi kuzomubvunza.”—Zvir. 18:17, Bhaibheri Dzvene MuChiShona Chanhasi.
19 Kana shamwari yatinovimba nayo ikaita chimwe chinhu chatisinganzwisisi pakutanga kana kuti chatinofunga kuti haina kuchiita zvakanaka, tingakurumidza kuipomera here? Kana kuti tinovimba nayo, kunyanya kana tange tichizivana nayo kwemakore akawanda? Kana tichibata shamwari dzedu dzisina kukwana nerudo zvakadaro, hatifaniriwo here kuvimba zvakanyanya naBaba vedu vokudenga, vane kufunga kwakakwirira chaizvo kupfuura kwedu?
20, 21. Nei zvichikosha kuti tizive wokupomera?
20 Ziva wokupomera. Nei tichifanira kudaro? Mamwe matambudziko edu ndisu tinogona kuakonzera uye tinofanira kubvuma izvozvo. (VaG. 6:7) Usaedza kupomera Jehovha kuti ndiye ari kukonzera matambudziko acho. Nei kumupomera kusina musoro? Funga nezvemuenzaniso uyu: Motokari inogona kumhanya chaizvo. Ngatitii mutyairi anoivhetemesa kupfuura zvinobvumirwa nemutemo paanenge achisvika pakona obva abondera. Zvinganzi here akaigadzira ndiye akonzeresa tsaona yacho? Kana! Saizvozvowo, Jehovha akatisika tiine rusununguko rwokusarudza. Asi akatipawo mirayiridzo inotibatsira pakuita zvisarudzo. Saka pane here chikonzero chokupa mhosva Musiki nokuda kwokukanganisa kwedu?
21 Ichokwadi kuti mamwe matambudziko atinosangana nawo handisu tinoakonzera. Mamwe acho anokonzerwa “nenguva nezviitiko zvisingafanoonekwi.” (Mup. 9:11) Zvisinei, hatifaniri kukanganwa kuti Satani Dhiyabhorosi ndiye anonyanya kukonzera uipi. (1 Joh. 5:19; Zvak. 12:9) Ndiye mhandu yedu kwete Jehovha!—1 Pet. 5:8.
KOSHESA UKAMA HWAKO NAJEHOVHA
Joshua naKarebhi vakakomborerwa nokuti vaivimba naJehovha (Ona ndima 22)
22, 23. Tinofanira kuyeukei kana takaodzwa mwoyo nematambudziko edu?
22 Kana uri mumatambudziko, yeuka muenzaniso waJoshua naKarebhi. Kusiyana nevamwe vasori gumi, varume ava vainge vakatendeka vakaunza mashoko akanaka. (Num. 14:6-9) Vakaratidza kuti vaitenda muna Jehovha. Kunyange zvakadaro vaifanirawo kudzungaira murenje kwemakore 40 pamwe nevamwe vaIsraeri vose. Joshua naKarebhi vakanyunyuta here, vachifunga kuti uku kwaisava kubatwa zvakanaka? Kwete. Vakavimba naJehovha. Vakakomborerwa here? Hongu! Chizvarwa chacho chose chakafira murenje, asi ivo vakazopinda muNyika Yakapikirwa. (Num. 14:30) Saizvozvowo, Jehovha achatikomborera kana “tisinganeti” pakuita zvaanoda.—VaG. 6:9; VaH. 6:10.
23 Unofanira kuita sei kana wakaodzwa mwoyo nematambudziko, kusakwana kwevamwe, kana kuti kwako? Nyanya kufunga nezveunhu hwaJehovha hwakanaka. Ita seuri kuona zvawakavimbiswa naJehovha zvichizadziswa. Zvibvunze kuti, ‘Ndingadai ndiripi kudai pasina Jehovha?’ Ramba uri pedyo naye nguva dzose, uye usabvumire mwoyo wako kuti umutsamwire!